Inyaniso yinyaniso engenakuguqulelwa ukuba abafazi bezazana abazalwanga. Oku kubonakaliswe kwangoku nje nge-supermodel edumileyo yeKendra Spears. Uneminyaka engama-24 kuphela ubudala, kodwa ngoku ngoku phantse bonke abagxekayo abatshitshisiweyo bathi uyadumila kwaye udumileyo uCindy Crawford. Nangona ulutsha olusondeleyo, uKendra okwangoku uluhlu lwemilinganiselo engama-50 engcono kwixesha lethu. "Ikhadi lokutyelela" - inambuzane ekhangayo ngaphezu komlomo. Kwimiba emininzi nguye owaba "obalaseleyo" ngokwenene kwi-Kendra Spears. Kwaye nangona le meli yayingekho, iileyile "uCindy encinci" yayingenakukwazi ukunamathela kumzekelo. I-chestnut emnyama, ukukhula okuphakamileyo - iisentimitha ezili-179 kunye nokumangalisa kwamabhinqa-84-61-86. Konke oku kuzuzwa kuhlanganiswe yimilenze engapheliyo kunye nomdlalo ovulekileyo, waseMelika.
I-Kendra Spears inomsebenzi okhuphuka entabeni, uhlala emenywa ngamanqaku adumile. Iiphakamiso, njengemiboniso yeGucci, Valentino, Lanvin, Hermes, Prada izikhangiso sele zisiwe. Ngoku i-supermodel yaba yinxibo yePatekPhilippe, i-Escada, i-Tod, kwaye ekwindla ibonisa kwiVeki yeMfashini yabhanya ngamanzi eendlu ezifana ne-Anthony Vaccarello, uLouis Vuitton, uMarc Jacobs.
Ukufumana ubude be-Kendra Spears yaqala iminyaka emihlanu edlulileyo. Omnye wee-arhente ze-model zeentengiso ze-Ford zamemezele ukhuphiswano, kodwa waya kumbono ngobuchule. Njengomzamo ngexesha lokunyuka kwee-intanethi ezahlukeneyo zentlalo, i-arhente ilungiselele ukuphosa, kodwa kungekhona nje ngaphandle kokungaxhunyiwe kwi-intanethi, kodwa nakwimithombo ye-Myspace. Ngelo xesha uKendra waphenduka iminyaka engama-20 ubudala. Wayengumfundi kwiYunivesithi yaseWashington kwaye wayexhomekeke ngamandla kwiintanethi zentlalo. Kwaye ngqo i-Myspace iholele iblogi yayo, izithuba zephoto. Nangona kamva, sele sele esaziwayo, wayethi wayengenayo i-iPod ngelo xesha. Njengoko kulindeleke, iintetho zaphumelela kumncintiswano we-intanethi, zaza zaphumelela ekugqibeleni ukuya eNew York kwaye zagqitywa isivumelwano kunye neThrown. Kuyathakazelisa ukuba kwakulo xesha uKendra wayegqoka amabhonti. Ukumanga okungalunganga kwamhlanje kuyalungiswa. Intombazana yayicinga kwaye ingenangqiqo - yagqweswa kwiyunivesiti kunye nediploma ekwakhiweni kwezakhiwo nakwizentlalo.
Emva komncintiswano, oko, ngendlela, uKendra wathatha indawo yesibini, kwaye isiphelo sesivumelwano sakhe somsebenzi savuka. Okumangalisa kukuba, Umoya unentembelo emangalisa, ngoko ke awubalulekanga kubaqalayo. Kwidliwano-ndlebe yakhe kaninzi uthi uhlala ekholose ngamandla akhe kunye nokuphumelela.
UDebut Kendra Spears waba yiveki yeFesto eNew York ngoSeptemba 2008. Kamva, lo mzekelo uthathe inxaxheba ekuvuleleni umbukiso eMilan ovela kuJohn Richmond, waza waya kwikhulumi yeGucci. Ixesha lakhe lokuqala eParis lalibonakalise liphumelele ngempumelelo, wayesebenzela abaphathi abathandekayo njengo-Valentino, Lanvin, ongumKristu Lacroix. Emva kokuphela kwexesha lemiboniso yefestile ngo-Oktobha 2009, iintetho zaqala ukubonakala zivame ngokuphindaphindiweyo kumaphephancwadi aseNtaliyane naseDanish. Kwixesha lekwindla ka-2009, uKendra waba ubuso bukaPrada. Ngo-2010-2011 waba ngumhlobiso wekhava elidumileyo iVogue kwaye ngexesha elifanayo umqondiso wasayina izivumelwano ezininzi ezintle.
Ubume bakhe obuhle kakhulu uKendra udla ukutya okunempilo, ayithandayo kwaye ukholelwa ukuba nokuba i-snack ehambayo imele ibe yuncedo ngokukhulu. Ukuba, ngokomzekelo, iinqompe, i-cashews, kuba zizityebi kwi-carbohydrates kwaye ukuba i-calori ephantsi. Ukuba i-yogurt, ngoko-ke ngaphandle kwee-fillers, ukuba i-tshokoleta, imnyama nje. Ngaphezu koko, uKendra akaze asebenzise ukuphakamisa, kwaye ucinga ukuba le nqanaba ibe ngumhlobo ongcono kunomfanekiso omncinci. Kulo naliphi ikhoneni lehlabathi umzekelo uyavuka kwaye nanini na ixesha livuka, lihlala liqala usuku lokuzilolonga. Inkqubo yonyango yosuku ngalunye yaseKendra ibhukuda kunye nebhayisikili.
Ukususela kumzekelo ukuya kumakhosazana
Ngomhla wokugqibela wehlobo lelo nyaka, umzekelo waseMelika weKendra Spears waba ngumfazi osemthethweni weNkosana iNkwenkwezi uRahim Aga Khan, oyindodana endala ye-Royal Highness uKarim Aga Khan IV. Umtshato womtshato kwizithethe eziphezulu zeSilamsi zenzeka kwiSwitzerland ebalaseleyo kwibhankini yeLake Geneva evulekileyo kwindlu yaseRoma yaseShato de Bellev.
Isambatho somtshakazi sasinomdla kwaye sasifaneleke ukuba siyinkosikazi yokwenyaniso. Imveli yamaSulumane umtshato we-sari wendlovu lwendlovu yayihlotshiswe ngamaphetheni egolide kwaye ihlanganiswe kakuhle kunye nemigcobo ekhethekileyo. Sagqiba umdada wendandatho yendabuko yendabuko.
Njengoko kwaziwa, uKendra Spears oneminyaka engama-24 wamkela i-Islam ngaphambi komtshato, kwaye ukususela ngoku akafumananga nje isihloko sesikosana, kodwa ke enye igama-uSalva. Ngendlela, uKendra akayena umzekelo wokuqala wokungena kwintsapho yomcebisi kunye nenkokeli yokomoya yombutho wamaSulumane woBuphakamileyo bakhe. USam Aga Haniv watshata umzekelo waseBritani, uSara Crockett-Pool. Udadewabo kaRahim kunye nomntakwabo nabo babemi emitshatweni yomthetho kunye nemodeli, kunye nomkhulu wakhe wayengumlingani womdlali weqhawe uRita Hayworth. Ngoko, isikhulu mhlawumbi sasingenayo ingxaki ngentsikelelo yomtshato onjalo.
Nangona ulwahlula kwiminyaka ubudala, uKendra ngokwakhe uthi uyavuya kakhulu ukuba ufumene umlingane womphefumlo. Kwaye imbali yayo iphinda ibonise ukuba kwihlabathi lanamhlanje iindaba zobomi malunga neCinderella azilahlekanga ukufaneleka kwayo.
Udliwano-ndlebe noAndrey Chernyshov
UVladimir Etush: i-biography, ifilimu
Izipho nge-zodiac: Iimpawu zamanzi
Ukucoceka: iimpawu zonyango kunye neempendulo
Hake kwi-tomato sauce
Perkal - yintoni le nto (ukubunjwa kunye nomgangatho). Yintoni ebhetele kwilinen yelinen: i-percale, i-satin okanye i-poplin?
Owesifazane olungele kakuhle-owesifazane onokwakheka